KALLUUN "ELENA": DABEECADDA FASALKA IYO AGROTECHNOLOGY EE BEERASHADA - KU'SAABSAN
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, pear wuxuu ahaa geedkii caanaha ugu caansanaa. Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad ku beerato pear ah noocyada kala duwan ee "Elena" iyada oo aan wax dhibaato ah oo ku raaxeeyso midhihiisa dhadhan fiican leh.
Noocyo kala duwan oo cayayaanka "Elena"
Kalluun "Elena" waa noocyo hore oo jiilaal ah. Tani waa geed miro gaaban oo leh taajkii barxadda. Miraha waxay ku koraan miisaankoodu ilaa 190 g, midab huruud ah. Dhadhanka macaanku waa macaan iyo dhanaan, wax yarna tartar. Waxsoosaar ka yimid hal geed - ilaa 40 kg. Tafaasiishan ee "Elena" noocyo kala duwan ayaa kaa caawin doona inaad ogaato in aad ku beeranayso beertaada ama haddii kale.
Ma taqaanaa? Giriigyadii qadiimiga ahaa waxay ka baxsadeen jirro dhaqdhaqaaqa inta lagu jiro isgoysyada badda iyadoo la adeegsanayo isteroberi. Waxay si joogto ah u nuugeen qaybo ka mid ah miraha casiir leh, iyo calaamadaha jirrada mareenku hoos u dhaceen.
Waxa kale oo muhiim ah in la yiraahdo waxsoosaarayaasha loo yaqaan pear pollers. Waxaa jira dhowr nooc oo geedo miro ah oo u baahan in la beero noocyo kale oo xaafadda ah. Waxay u egyihiin iyaga.
Kiimikada "Elena" uma baahna pollinators. Qalabkan waxaa loogu yeeraa Is-dhalashada. Sidaa awgeed, kala duwanaanshahan waxay si madax bannaan u dhigaan miro.
Sida dhirta oo dhan, noocyada kala duwan ee "Elena" waxay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iido daro.
Cadaadiska cudurada fungal;
Ku keydiyay qaboojiyaha illaa afar bilood;
Faa'iidooyinka kala duwan ee noocaan ah waa kuwo yar:
Iyadoo soo go'ay miro badan, miraha ma aha hal-cabbir;
Dhibaatada jiilaalka celcelis ahaan.
Mabda 'pena' Elena waxay leedahay faa'iidooyin ka badan faa'iido darrada, taas oo macnaheedu yahay in ay macno u leedahay in la beero geedka geedkan oo uu ku raaxaysto goosashada.
Ma taqaanaa? Shiineeska, oo leh "phen li", waxaa loola jeedaa mid ka mid ah laba arrimood: qayb ama wadaag pear. Sidaa darteed, sheekada qadiimiga ah ee Shiinaha ayaa sheegay in aadan wadaagi karin pear ah, haddii kale kala go'id waa lama huraan.
Hababka beeritaanka noocyo pear "Elena"
Kalluunka "Elena" beeray xilliga dayrta ama gu'ga. Waa in lagu dhajiyo maskaxda in beeritaanka dayrta la fuliyo qeybta kowaad ee bisha Oktoobar, ka hor bilawga barafka, iyo gu'gu wuxuu dhacaa dhamaadka bisha Abriil, marka dhaxantii dhaxantay.
Waxay macno u leedahay in la caddeeyo in gobollada koonfureed ee dalka beerto xilliga dayrta ay faa'iido leedahay sababta oo ah dhidibku kama yara qaadi doono xididada xagaaga kulul. Gobollada waqooyi waa in la beeray pear guga, sida jiilaalka qaboobaha geedka dhiman doono.
Sida loo doorto oo loo diyaariyo meel ka hooseysa pear "Elena"
Ka hor inta beerto, dooran meel loogu talagalay pear. Waa inay qorraxdu noqotaa, laakiin ma kululaan, halka ay tahay in maskaxda lagu dhajiyo in hawada kuleylka leh uumiga biyaha u yeelan doonto saamayn xun oo geedka iyo waxa uu bilaabi doonaa inuu ku engego. In beerta, pear waa in lagu beeray midkood koonfurta, ama koonfur-galbeed, ama dhinaca galbeed.
Biyaha hoose waa inaanay ka sarreeynin laba mitir. Cawska cufan ee caleenta ah ma shaqeyn doono pear "Elena", maadaama aysan u dulqaadanayn qoyaan xad dhaaf ah.
Waxaan go'aansanay in uu jecel yahay pear, sidaas darteed waxaan u jeedaa diyaarinta goobta for beeritaanka.
Pit waxay bilaabaan inay gasho dayrta, xitaa haddii ay go'aansadeen in ay ku beeri pear guga. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in inta lagu jiro xilliga qaboobaha godka uu degayo, iyo ka dib markii laga beerto, lagama maarmaan noqonaayo in laga walwalo "qulqulka" ciidda.
Waa muhiim! Qulqulo qoorta xidid geedka geedaha ayaa burburaya.
Haddii aad go'aansato inaad ku beerto pear xilliga dayrta, waa inaad diyaarisaa dhulka toddobaad ka hor intaan la beeri. Qoto dheer ee godka ku xiran tahay xididdada seedling. Waa inay ahaataa 50 cm, iyo qiyaastii mitir.
Waxaad sidoo kale qodi kartaa god yar. Tani waxaa la sameeyaa si loo buuxiyo godadka leh 3 cm oo ciid ah oo bacrin ah, taas oo lagu qasi doono midkood humus, ama peat, ama leh superphosphate.
Waa muhiim! Iska ilaali Bacriminta nitrogen, waxay si xun u saameyn kartaa geedkii midhaha.
Boorash ayaa lagu riixaa bartamaha ceelka, taniyo pear-ka ayaa loo arki karaa iyada oo aan wax xiiran ah. Qeybta hoose ee ceelku waa la furfuray, godadkana waxaa lagu sameeyaa derbiyada godka, kaas oo hagaajin doona is dhaafsiga hawada waxayna kicinaysaa koritaanka nidaamka xididka.
Hadda waxaa lagama maarmaan ah in la sheego oo ku saabsan beeritaanka seedling daloolka.
Waa lagama maarmaan in la diyaariyo seedling. Geedku wuxuu dhajiyay xididada adag oo xoog leh ilaa 12 cm oo gebi ahaanba gooyay. Hadda in sapling waa qad toosan, waa in lagu dhejiyaa baaldi biyo ah saacad.
Dhulkii godka ka qoday waxaa lagu qasi karaa ash in 1: 1 oo lagu qasi jiray biyo. Joogista isku dhafka waa inay la mid noqoto kareemka oo dhan. Geedka xididdada seedling ee isku dhafka ah.
Dhul dhulka ugu hooseeya godka oo ku dhaji tobanka ukunta ceeriin ee hoose. Ka dibna buuxi ceelka isku dar ah ee dhulka iyo ash oo ku rusheey carrada qalalan.
Waxaan dhali doonaa sapling. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in qoorta xididku uu yahay heerka lakabka sare ee carrada. Waxaad ku dhejin kartaa bararka hoose ee godka ama calaamad ku dhaji kartaa godka. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad abuurto seedling si sax ah, iyada oo aan la qotonin qoorta xididka.
Ka dib oo dhan, waxaan ka buuxin ceelka dhulka leh si ay geedku waa mid deggan. Waxaan ku dhajino daraasiin qumman oo wareega wareega. Taas ka dib, ceelku wuxuu ku daboolan yahay dhulka "tuulo". Buurtani wuxuu degi doonaa ka dib markaad waraabiso.
Iska yaree dusha sare ee beerta beerta ama isku dar ah ee dhulka iyo ash.
Foostadu waxay ku xidhan tahay god, laakiin ma jiidin.
Pear la beeray ku shub laba baaldiyo oo biyo ah.
Wareegga Pristvolny waa mulched peat, sida balka, compost ama warqad.
Ukuntu waxay siiyaan geedo nafaqo leh waqti dheer, waadna ilaawi kartaa quudinta wakhtigeeda.
Waa muhiim! Ukunta oo dhan waxaa lagu bedeli karaa qolofta ukunta.
Noocyada daryeelka ee noocyo ku'saabsan "Elena"
Ka dib markii laga beero isteroberi waa in la hubiyo daryeel ku habboon geedka. Ka dib dhan, tani waa dammaanad ah goosashada wanaagsan.
Sida hore loo soo sheegay, geedka jecel yahay qoyaan, sidaas darteed waa inaad ka fekertaa nidaam ah isteroberi, "Helena". Best - rusheynta. Sidaas awgeed biyaha ayaa geedka oo dhan geli kara meelo badan oo yaryar.
Waxa kale oo aad samayn kartaa 12-centimitir yar oo yar oo pear ah. Waraabinta waa in la sameeyaa dhowr jeer xagaaga iyo gu'ga. Haddii ay dhacdo kuleyl, waa lagama maarmaan in la badiyo pear marar badan.
Waxa ugu muhiimsan waa in la xasuusto in geedku u baahan yahay waraabinta wanaagsan, laakiin sidoo kale waa inaadan ilaawin adkaanta jiilaalka ee "Elena". Haddii dhirta aan helin qadarka saxda ah ee qoyaanka xagaaga oo siiyay goosashada wanaagsan, waxa loola jeedaa in dhirta la gooyey. Dhirta yaryar way u adkahay barafka.
Ma taqaanaa? Waxaa la yaab leh, jilicsan oo jilicsan oo casaan leh ayaa ka caawiya in ilkahaagu sii xoogaystaan. Waa wax ku saabsan miiqyada. Pear waxaa ku jira kalsiyum dabiici ah iyo fosfooraska, taas oo, si wadajir ah u wada shaqeynaya, xoojinta dhalada iliga.
Dharka ugu sareeya waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ku wajahan cufnaanta sare ee jeexa Helena.
Si loo go'aamiyo waxa aad u baahan tahay si aad u quudiso geedka, waxaad u eegi kartaa muuqaalkeeda.
Haddii caleemaha caleemaha u muuqdaan kuwo aan horumarsanayn, macnaheedu waa in dhirtu aysan ka yarayn nitrogen;
Da'da liidata iyo hoos u dhaca caabbinta barafku waa calaamad muujinaysa nitrogen-ka xad-dhaafka ah;
Dayrta caleemaha ee qaybta hoose ee geedka iyo ku haynta ee ku hari burooyinkeeda waa la'aanta fosfooraska.
Midabka caleenta ee caleemaha iyo qalajinta degdega ah waa calaamado muujinaya yaraanta potassium;
Haddii caleemaha ka muuqato caleemaha, taas oo keenaysa dhimashada meelahaas, waa la'aanta kalsiyum.
Waxaad u baahan tahay inaad siisid pear si joogto ah, sababtoo ah sidaas geedka waxay heli doontaa nafaqo wanaagsan. Beerasho leh bacriminta haboon waxay noqotaa mid joogto ah.
Waa muhiim! Bacrimiya midhaha miro ayaa loo baahan yahay haddii ay ku koraan ciidda bacrin ah.
Dhimashada xitaa ciidda ugu badan ee nafaqo leh waxay saameyn kartaa isdhexgalka iyo isdhexgalka. Rabshaduhu waxay isticmaalaan habab kala duwan oo ku xiran nooca pear.
Beerta qaar ka mid ah waxay ka qayb qaadataa nafaqooyinka xilliga dayrta. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad diyaariso pear qaboobaha oo siiso ciidda dhammaan nafaqooyinka xilliga qaboobaha. Samee dharka dayrta xilliga dayrta.
Beeraha kale dalbado bacriminta guga. Quudintaas waxaa loogu talagalay dib u soo celinta caadiga ah ee geedka jimicsiga.
Waxay si degan u diyaargaroobi kartaa xilliga sii kordhaya. Waxay kaloo ka caawisaa hagaajinta tayada dalagyada mustaqbalka.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah pear waxaa ku jira 20% baahida maalin kasta ee fiber, 10% fitamiin C iyo 6% oo ah potassium.
Si loo go'aamiyo nooca bacriminta, waa inaad ku tiirsanaataa sifooyinka soo socda:
Xilliga dayrta, Bacriminta iyo Bacriminta Fosfatiga ayaa la soo saaraa. Waxaa loo qaybiyaa wareega wareegga caleemaha si qoto dheer ah 45 cm, dhar-gashadaan waxay si fiican isugu qasan yihiin Bacriminta dabiiciga ah. Bacriminta noocan oo kale ah waxaa la isticmaalaa 5tii sanoba mar. Qiyaasta bacriminta waxaa lagu xisaabiyaa da'da geedka iyo qiimaha nafaqada ee ciidda. Organics waxay wax ku biiriyaan geedkii labadii sanaba hal mar. Bacriminta Nitrogan waxay caadi u tahay koriimada iyo midhaha "pears".
Sidoo kale waa inaadan ilaawin quudinta foliar. Bacriminta waa xalka nafaqooyinka. Waxay ka kooban tahay 2% xal of sulfate potassium.
Xalka Urea waa in lagu buufiyaa pear 10 maalmood ka dib marka la dhammeeyo ubax. Daadi mar labaad laba toddobaad kadib.
Waxaad isticmaali kartaa quudin adag, tusaale ahaan, ammophos, nitrophos, nitrophoska iyo nitroammophos.
Intaa waxaa dheer in ay Bacriminta-Bacriminta u baahan yihiin in ay sameeyaan Bacriminta nafaqeeyayaalka yar yar. Iyada oo ay caawimaad, ciidda waxaa lagu hodansan yahay birta, manganese, zinc, iwm. Dooro iyaga oo ku saleysan habka ciidda.
Waxaad ka dhigi kartaa digada leh fosfooraska, nitrogen iyo potassium.
Waa muhiim! Ka taxadar arrimaha arrinka, sababtoo ah waxay keeni kartaa gubasho gubasho daran.
Goorta iyo sida loola tacaalo pear
"Elena" waa la gooyaa koryaha, guga iyo jiilaalka. Hannaankani wuxuu hagaajiyaa tayada midhaha, wuxuu xakameynayaa midhaha iyo koritaanka geed, wuxuu hagaajiyaa iftiinka caleemaha. Gooyo waxay ka caawisaa inay koraan geedkii aad u baahan tahay koritaanka leh jir xoog leh oo u adkeysan kara culeys dalaad badan.
Gubashada guga waxaa la fuliyaa ka dib markii dhaxan daran.
Xeerarka sirta ah
Isticmaal shukumaan maqashiin aftahan ah. Wixii geedaha waaweyn waxay u baahan yihiin inay qaataan hacksaw. Kadib jarida, qalabka beerta oo dhan waxaa lagu nadiifiyaa khamriga.
Xiddiga dhexe waxaa la gooyaa afar meelood meel. Tani waxay u oggolaaneysaa inay mustaqbalka ka sameeyaan koob khafiif ah.
Daraasiinta waxaa lagu sameeyaa heerkul aan ka yarayn 5 ° S .
Kadib qaabsocodka, xaleefyada waxaa lagu duubay iskudarka soo socda: saliidda qallalan, rinjiga saliida, garoonka beerta iyo Rannet.
Waxaa jira laba siyaabood oo lagu kala jarayo. First: gooyaa saldhigga laanta. Si aan u jilicsan jilifka, gooyaa waxaa lagu sameeyaa xagga hoose, ka dibna - barta sare ee ugu weyn. Tani waxay dedejisaa koritaanka caleemaha lateral iyo baraaruga ee burooyinkeeda ka hooseeya jarista. Ka hor inta manjooyin guga ka hor, waxaa reebban in la isticmaalo Bacriminta nitrogen.
Goynta saxda ah ee geedka waxay u oggolaan doontaa in pear si ay u bilaabaan inay bixiyaan goosashada qani ku ah, iyo meelaha dhan jarista ayaa kori doona.
Manjooyin xagaaga waa nooca cadka. Xilliga xagaaga, caleemaha sii kordhaya ayaa laga saaraa dushooda.
Hadda waxaa muhiim ah in la tixgeliyo marka la xiri karo iyo waxa noqon doona falceliska pear:
Xididdada june. Gooyooyinka noocan oo kale ah waxay keenaysaa dib u dhac ku yimaada koritaanka caleemaha, laakiin waxa ay gacan ka geysataa qaabab cusub. Waa muhiim in la xusuusto in qanjirada si xun u saameeyo xilli sii kordhaya ee isteroberi, taasina waxay saameeysaa jiilaalka.
Ku dheji dhammaadka koritaanka kobaca. Waxay hagaajinaysaa koriinka caleemaha.
Kama talineyno manjooyin qaboobaha, maaddaama heerkulka hooseeyo uu saameyn xun ku yeesho geedka. Laamuhu ma haystaan ​​waqti ay ku bogsadaan oo ay u dhintaan dhaxan.
Manjooyin noocan oo kale ah ayaa laga soo bilaabo bilowgii November ilaa March, sababtoo ah waqtigan geedka wuxuu yahay nasasho. Manjooyin noocan oo kale ah waxaa lagu sameeyaa iyada oo aan la isticmaalin. Isku-darka lakulmay, lafdhabarta, laan dhintay.
Si aad u gooyso laamaha waaweyn waxaad u baahan tahay inaad furto dhexda geedka. Geedo jiilaal ayaa loo baahan yahay oo kaliya haddii aad rabto inaad ka saarto dhererka geedka iyo ka saarto laanta faafa. Si aad u hubiso in xaakinnadu si dhakhso ah u bogsadaan oo aan barafoobin xilliga jiilaalka, isticmaal saliideeye nadiif ah, ka dib markaad gooysid, ku daawee jeexista beerta beerta.
Ma taqaanaa? In Europe, caleemaha pear ayaa la sigaar cabbay, oo kaliya markaas ka yimid tubaako.
Goorta la goosanayo iyo sida loo keydiyo noocyada kala duwan ee pear goosashada 'Elena'
Bannaanka u badan isticmaalaan sifooyinka soo socda si ay u bilaabaan goosashada miro khudradda:
Awood u yeelashada uurjiifka;
Midabka, dhadhanka iyo dhadhanka saxarka.
Waxaad ku qaadan kartaa pear gacantaada oo yar yaree. Haddii pear si dhakhso ah looga soocay laanta - waxaad bilaabi kartaa goosashada. Haddii pear weli hayo, ka dibna ma uusan iman.
Isugeynta "Elena" waxay hoos u dhacday illaa Oktoobar. Sidaa darteed, laga bilaabo bishaan, waxaad bilaabi kartaa in aad eegto isteroberi ah ee ku fulan iyo goosashada.
Ka dib marka aad soo ururiso isteroberi, waa in lagu meeleeyo meel mugdi ah oo qabow ah oo ku dillaac. Meesha noocan oo kale ahi waa inay noqoto mid fayadhowr ah oo hawo leh.
Qolkan waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso heerkulka habboon iyo qoyaanka. Xilliga jiilaalka, heerkulku waa inuu noqdaa ilaa 3 ° C, qoyaanka qolka - 85%.
Qoyaan xad dhaaf ah ama heerkul sarreeya waxay keenaan isteroberi si dhaqso ah. Haddii heerkulka uu hooseeyo oo hawadu ay qallalan tahay, isteroberi ayaa hoos udhigaya oo luminaya casiirnimada.
Kiimikada waa in lagu dhejiyaa sanduuqyo gaar ah, maadaama kaydka dhulka la dhigo uu horseedayo caajis. Sanduuqyada waa in la si fiican u hawo qaboojiyaa. Xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso shelefyo. Isteroberi ayaa lagu ridayaa iyaga oo ku daboolaya oo ku rusheeyey jajab.
Waa muhiim! Ha dhigin miro kale oo miro ku dhow pears.
Iska ilaali isteroboyinka lafdhabarta leh.
Caabbi ah ee kala duwan ee pear "Elena" si cudurada iyo cayayaanka
Kalluunka "Elena" wuxuu u adkeysan karaa cudurrada fangasta kala duwan, gaar ahaan qolada ama Septoria.
Kansarka madow (wuxuu ku dhacaa caleemaha iyo miraha, mararka qaarkood kortens laftiisa, taas oo ah qaab khatar ah);
Kareemka miraha (wuxuu isu muujiyaa qaabka uu u jimcsan yahay midhaha, waxay u faaftaa si dhakhso ah).
Aphid (waxay keentaa isbeddelka caleemaha iyo sida ugu dhaqsiyaha badan);
Aboorka dhoobo (wuxuu yareeyaa heerka horumarinta geedka oo dhan iyo cuno saxarka pear ee gudaha);
Cayayaanka lakabka ah (caleemaha waxay soo noqdaan brown, jabaan oo u dhintaan).
Kansarka madow Xilliga guga horraantii, dhoobada dhagta. Ku buufi caleemaha saameeya dareeraha Bordeaux. Iska ilaali caleemo dhacday iyo miraha qallalan.
Miro miraha. Manjooyin labajibbaaran oo ka saarista qalajinta iyo laamihii dhintay iyo miro jabsan.
Faashadaha cagaaran. Waxaad ku dabooli kartaa buufinada ash iyo saabuun. 300 g oo ash ayaa lagu kariyaa 10 litir oo biyo ah iyo 40-50 g oo saabuun ah ayaa lagu daraa.
Aboor ku'saabsan. Xakamee inta u dhaxaysa safarka iyo wareegyada geedka. Samee guga iyo xagaaga. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dabaysha pheromone. Manjooyin joogto ah ee caleemaha. Insecticides ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa.
Cayayaanka looska Uruuri caleemo dhaca iyo waxyeelo iyo gubasho. Waxaa suurtogal ah in lagu daboolo buufinta - 0,2% Decis iyo Inta badan-Vir.
Ma taqaanaa? Qarnigii 18aad, pear waxaa sidoo kale loo yaqaan "miro saliid ah" sababtoo ah maadada jilicsan, oo ah dufan yar.
Pear Helena waxay leedahay tayo fiican oo ka fiican kuwa xun. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato khudradda casiir leh ee midhaha cusub oo u dhaw Sannadka Cusub, waxaa loo abuuray adiga.